यसरी परिवर्तन गर्नुहोस फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘रियाक्सन’ - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, कार्तिक १, २०७७ १३:१०
वानप्लसले ल्यायो बजेट सेगमेन्टमा फाइभजी स्मार्टफोन ‘नोर्ड एन
क्लिन फिडसहित आईपीएलको लाइभ प्रसारण गर्दै मेरो टिभी
कम प्रकाशको समयमा मोबाइलबाटै यसरी खिच्नुहोस् आकर्षक फोटो
क्लिन फिडबारे जान्नैपर्ने केही कुरा
यसरी परिवर्तन गर्नुहोस फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘रियाक्सन’
काठमाडौं । फेसबुक म्यासेन्जर साथिभाइसँग जोडिने सबैभन्दा सहज विकल्प बन्दै गएको छ । यसैबाट भिडियो, भ्वाइस कलिङका साथै म्यासेज समेत गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोगमा अत्याधिक हुने गरेको छ ।
त्यही अनुरुप फेसबुकले पनि त्यसमा समय समयमा धेरै फिचर हरु थप गर्दै आएको छ । फेसबुकले सार्वजनिक गरेको म्यासेन्जरको नयाँ अपडेट अनुसार फेसबुकको कलरमा नै ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
केही समय अघिमात्रै इन्स्टाग्राम र फेसबुकको म्यनसेन्जरलाई मर्ज गर्न सकिने सुविधा ल्याएसँगै अहिलको म्यासेन्जरको कलर पनि इन्स्टा र म्यासेन्जरको मिक्समा बनेको फिल हुने खालको रहेको छ ।
उक्त नयाँ अपडेटमा उपलब्ध भएको अर्को नयाँ फिचर भनेको रियाक्सन पनि हो । तपाईंले अहिले अरु साथिले पठाएको म्यासेजमा डबल क्लिक गर्दा नै रियाक्ट गनै सकिने सुविधा रहेको छ । तर, त्यसमा तपाईंले डबल गर्दा अहिले ‘लभ’ रियाक्ट हुन्छ ।
अब त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त ? परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा पनि हो । त्यसका लागि तपाईंले सुरुमा साथिले पठाएको म्यासेजमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ रियाक्टको अप्सन आउँनेछ । त्यसको साइडमा ‌‍‘+’ की रहेको छ ।
उक्त प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यति गरेसँगै त्यहाँ तपाईंले अन्य कुनै रियाक्ट गर्न मन भएको खण्डमा तत्कालै गर्न पनि सक्नुहुनेछ । त्यसका साथै तपाईं सँधैको लागि आफ्नो रियाक्सन लिस्ट परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ ‘कस्टमाइज’ भन्ने अप्सन रहेको छ । उक्त अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यहा क्लिक गरेसँगै तपाईंले माथि रहेको रियाक्सनमध्ये कुन ठाउँमा कुन राख्ने हो भनी छनोट गर्दै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ ।
मोबाइलमै भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहोस् यी एप
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसका कारण लामो समय घरमै बस्नुपर्ने भए पछि युट्युव भिडियो क्रियटरको संख्या उल्लेख्य
काठमाडौं । दिनको उज्यालोमा त प्रायः सबैले आकर्षक तस्वीर खिच्न सकिहाल्छन् । तर दिन ढलेपछि
दशैंमा नयाँ फोन किन्नुभयो ? यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्
काठमाडौं । चाडबाडको समयमा कतिपयले नयाँ लुगा मात्र होइन नयाँ मोबाइल समेत खरिद खरिद गरिरहेका
यसरी लक गर्नुहोस् मोबाइलमा रहेका एप
काठमाडौं । पछिल्लो सयम एपको प्रयोग बढिरहेको छ । प्रयोगकर्ताको सहजताको लागि हरेक सेवा एपमार्फत
नबिल बैंकलाई एडीबीको ‘नेपालमा अग्रणी पार्टनर बैंक’ अवार्ड
फेसबुकको नयाँ अपडेट, अब जुनसुकै गेम डाउनलोड नगरेरै खेल्न सकिने